ए डिभिजन लिग : हिमालयन शेर्पा र एपीएफको खेल शुरु (लाईभ भिडियो सहित) , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ए डिभिजन लिग : हिमालयन शेर्पा र एपीएफको खेल शुरु (लाईभ भिडियो सहित)
काठमाडौं । राजधानीमा जारी पल्सर ए डिभिजन फुटबल लिगमा शुक्रबार हिमालयन शेर्पा र शसस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लवबीच खेल भइरहेको छ । अहिले खेलको पहिलो हाफ चलिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म दुबै टिमबाट गोल हुन सकेको छैन ।